Accueil > Gazetin'ny nosy > Inty sy Nday: Hvm mpanampatra fahefam-panjakana
Inty sy Nday: Hvm mpanampatra fahefam-panjakana
Ny Hvm dia ny antoko mitana ny fahefam-panjakana amin’izao fotoana. Tsy voatery ho olona manana fahefam-panjakana avokoa koa anefa ny mpikatroka Hvm, saingy mirehareha izy ireo satria hoe “eo aminy izany fahefam-panjakana izany”. Dia manararaotra manampatra izany sy minia mandika lalàna mihitsy aza ka mihevi-tena ho tsy maty manota.
Mbola averinay indray fa tsy voalohany amin’ny olona nitantana ity firenena malagasy ity ianareo ao amin’ny Hvm, ary tsy voalohany maneran-tany koa. Mba efa maro ihany ireo mpitondra nihevi-tena ho tsy tratry ny aloka na teto Madagasikara na ny tany ivelany, fa tratry ny alok’akoho, hoy ny fitenenana. Omaly izao, nanao fivoriana tao amin’ny Foibeny etsy Antanimena ny mpikatroka Hvm. Nisy ny avy any ivelan’Antananarivo. Azo antoka fa nafarana manokana hanatevin-daharana sy hanamaro isa an’ireo ho etsy amin’ny Lapan’ny Kolotsaina sy fanatanjahan-tena etsy Mahamasina anio tolakandro izy ireo. Ilay anio tolakandro etsy Mahamasina moa dia ilay “Rodorodon’ny fisandratana”, ka ireo rehetra “nolalaovina tamin’ny volam-bahoaka” no hifamotoana aho, hifanome tokim-panompoana ary handray ny baiko sy ny tetika maloto hampahombiazana ny fampandresena ny olon’ny Hvm amin’ny fifidianana ho avy.
Rehefa nivory tao Antanimena ry zareo omaly dia akory ny hatezeran’ny mpampiasa lalana fa voabahana avokoa ka tsy nisy nandehanana iny lalana manodidina ny foiben’ny Antoko Hvm etsy Antanimena iny. Niteraka fikatsoan’ny fifamoivoizana mihitsy izany, satria voatery nivily lalana ny sasany, ary lalana tsy tokony hifanenana, ohatra, no lasa nanaovana an’izany. Ny andro rahateo zoma.
Ka mahavariana ihany ny tranga toa ireny satria tsy hoe rehefa manana fahefam-panjakana ianao ka mivory amin’ny toerana iray dia manan-jo sy manana ny rariny raha tapahinao ny fifamoivoizana amin’ny lalam-bahoaka.
Trangan-javatra iray ibaribarian’ny fiheveran-tena ho ambony noho ny hafa sy ambony noho ny lalàna izany, saingy tsy tokony hadinoina koa fa tranga iray manome fahavitrihana ny maro hijoro hanohitra sy “hanao araka ny fanaovana azy” an’izao fitondrana mpanararao-pahefana izao.